Star Trek Beyond – Mood for Movies
ကနဦးစွာ ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံပါရစေ။ Director Justin Lin တစ်ယောက် ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်မယ်လို့ကြားသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အလွန်စိတ်ပျက်မိခဲ့တယ်။ Fast and Furious ကောင်က ကိုယ်တွေကြိုက်တဲ့ Star Trek ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ပေါ့။ အခုလိုပြောလိုက်လို့စာဖတ်သူတို့ဘာမှ စိတ်မပူပါနဲ့။ တစ်ကယ်တော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ တစ်ကယ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ Star Trek ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားအဖြစ် ယခုဆို ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီလေ။
ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့်လောက်ကို ပြန်သွားကြည့်ရအောင်ဗျာ။ Star Trek into Darkness က တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဝင်ငွေ $467 Million နဲ့အောင်ပွဲခံနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ တစ်ချို့ကတော့ သူတို့သဘောကျတဲ့ Khan ဇာတ်ကောင်ကို သရုပ်ဖော်တာ မကြိုက်လို့ဆိုပြီး အညံ့ဆုံး Star Trek ရုပ်ရှင်တို့ဘာတို့နဲ့အော်ဟစ်နေကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိတဲ့အချိန်ပေ့ါဗျာ။ ဒီအချိန်မှာပဲ ထိုဇာတ်ကားတွေရဲ့Director ဖြစ်သူ J.J. Abrams တစ်ယောက်က တတိယမြောက် Star Trek reboot ရုပ်ရှင်ကို မရိုက်ကူးတော့ဘူးဆိုပြီး ထို Project က ထွက်သွားတော့တယ်။ (သေချာတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ The Force Awaken ကြောင့်ပေါ့။)
2014 လောက်မှာထင်တယ်။ အစကတော့ အရင်ဇာတ်ကား2ကားကို ဇာတ်ညွှန်းရေးခဲ့တဲ့ Roberto Orci က တတိယမြောက်ဇာတ်ကားအတွက် ကိုယ်တိုင်ဇာတ်ညွှန်းရေးကာ Director အဖြစ် ပထမဆုံး ရိုက်ကူးမယ်လို့ကြားလိုက်ရတယ်။ နည်းနည်းတော့လန့်တာပေါ့။ တစ်ခါမှ Director မလုပ်ဖူးတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာတစ်ယောက်က Star Trek လို ဇာတ်ကားကြီးကို ကိုင်မယ်ဆိုတော့။ ဒါပေမဲ့ ထိုနှစ် May လ လောက်က စလိုက်တဲ့ထိုသတင်းဟာ December လောက်မှာ ပျက်သုန်းသွားခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း “Creative Differences” ဆိုတဲ့ အမည်တစ်ခုနဲ့ပဲ Roberto Orci နဲ့Paramount တို့လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်။ ဒီတော့ Roberto Orci ကလည်း သူနဲ့အတူ သူရေးတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို တစ်ပါတည်း ယူဆောင်သွားတယ်။ ဒီမှာတင် အခက်တွေ့တော့တာပဲ။ 2015 ထဲဝင်လာပြီ။ 2016 ဟာ Star Trek ရဲ့နှစ် 50 ပြည့်နှစ်မို့အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်အောင် 2016 မှာ ထိုရုပ်ရှင် ထွက်ကို ထွက်မှ ဖြစ်တော့မှာ။ သူတို့မှာ ကျန်တဲ့အချိန်က 1 နှစ်ပဲ ရှိတော့တယ်။ ဒီအချိန်ထိ အဖြေဟာ မသဲကွဲသေးဘူး။ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေကတောင် ထိုဇာတ်ကား မရိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူး ထင်ပြီး တစ်ခြားဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးသွားကြတော့တယ်။
သိပ်တော့ မကြာလိုက်ဘူး။ 2015 August လောက်မှာဖြစ်မယ်။ ဒီ Project ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းဖို့စတင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာ Scotty အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ Simon Pegg ပဲ။ သူ့ရဲ့စိတ်ကူးတွေထဲမှာ ယခု တတိယမြောက် ဇာတ်ကားအတွက် ဇာတ်လမ်းတွေရှိနေခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ Simon Pegg နဲ့Doug Jung ဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ယခုဇာတ်ကားအတွက် ဇာတ်ညွှန်းတွေ စတင်ရေးသားလာတော့တယ်။ သူတို့တွေကို Paramount က Roberto Orci ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းကို မပြသခဲ့ဘူး။ ယခုထိလည်း ထိုဇာတ်ညွှန်းထဲက ဇာတ်လမ်းဟာ ဘယ်လိုလည်းဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိခဲ့ဘူး။ (Paramount နဲ့Roberto Orci တို့ကလွဲရင်ပေ့ါ။) အဲ့ဒီ့နောက်တော့ သူတို့အတွက် Paramount က Director တစ်ယောက် ခေါ်လာခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ သူတို့အားလုံး အံ့သြသင့်ကြရတော့တယ်။ Paramount ခေါ်လာတဲ့သူက တစ်ခြားမဟုတ်။ Fast and Furious ဇာတ်ကားတွေနဲ့နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ Justin Lin လေ။ Justin Lin က Fast and Furious ဇာတ်ကားတွေကို တတိယမြောက် Tokyo Drift ကနေ ဆဌမမြောက် ဇာတ်ကား Fast and Furious6အထိ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့သူ။ ဒါကို ပရိသတ်တွေကြားရတော့ internet မှာ ပြန့်သွားတဲ့ Comments တွေက “R.I.P Star Trek.” တဲ့။ ရယ်တော့ ရယ်ရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အပါအဝင်လေ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် Justin Lin အကြောင်းအနည်းငယ် ပြောချင်ပါတယ်။ သူဟာ အမှန်တော့ Indie ရုပ်ရှင်တွေနဲ့စခဲ့တဲ့သူ။ သူခေါ်တာကတော့ “Credit card movies” တွေတဲ့။ သူ့စရိတ်နဲ့သူကိုယ်တိုင် အကုန်အကျခံကာ ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေလေ။ “Shopping for Fangs” တို့”Better Luck Tomorrow” တို့တွေပေ့ါ။ သူဟာ Fast and Furious တွေကို စရိုက်တော့ လူတွေက ဒီ indie ကောင်က FF ကားတွေကို ဘာလို့လာရိုက်တာလဲပေါ့။ ခုလည်း ဒီလိုပဲ။ ဒီ FF ကား ကောင်က Star Trek ကို ဘာလာ လုပ်တာလဲပေါ့။ အမှန်တော့ ရှင်းပါတယ်။ Justin Lin က Star Trek အကြောင်းကို ကားတွေအကြောင်းထက် ပိုသိတဲ့သူပါ။ သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ 35 နှစ်လောက်ကတည်းက Star Trek နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူ။ သူတို့မိသားစုက Taiwan ကနေ California ကို ပြောင်းလာတော့ သူက 8 နှစ်သားပဲ ရှိသေးတယ်။ Fish and Chips ဆိုင်လေးဖွင့်တယ်။ သူရဲ့ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေက Star Wars ဖြစ်နေချိန်မှာ သူဟာ Star Trek ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာ ထိုအချိန်က ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့လောက်ထိ ပိုက်ဆံမရှိခဲ့ဘူးလေ။ အဲ့ဒီ့တော့ ညဘက်တွေမှာ အလကားပြတဲ့ Star Trek ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုပဲ ကြည့်ခဲ့ရပြီး ထိုအချိန်ကတည်းက Star Trek fan တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တော့တာပဲ။
Star Trek Beyond ဇာတ်ကားကို စဖွင့်တော့ ထုံးစံအတိုင်း Captain Kirk က တစ်ခြားဂြိုလ်တစ်ခုပေါ်မှာ ထိုဂြိုလ်က အကြီးအကဲတွေကို လက်ဆောင်သွားပေးနေတာ။ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး သူပြန်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ သူပေးမဲ့ လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ အရာလေးဟာ သူနဲ့ပြန်ပါလာခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ခါ ခရီးစဉ်ကြီးက5နှစ်သက်တမ်း။ အချိန်က3နှစ်ခန့်တောင် ကျော်လာပြီ။ USS Enterprise က သူတို့နားခိုလေ့ရှိတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Yorktown ကို ရောက်တဲ့အခါ Captain Krik နဲ့Spock တို့မှာကိုယ်ပိုင် အနာဂတ်အတွက် စီစဉ်ချမှတ်ထားပြီးသား ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ်စီရှိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖွင့်ပြောပြဖို့တော့ အခွင့်အလမ်း မသာခဲ့ဘူး။ Vice Admiral အဖြစ်ရာထူးတိုးဖို့Captain Kirk တစ်ယောက် အထက်ကို လျှောက်ထားပြီးလေ။ Spock တစ်ယောက်ကတော့ Uhura နဲ့လမ်းခွဲပြီးခါစ အချိန်ဖြစ်သလို Ambassador Spock တစ်ယောက်လည်း သေဆုံးသွားပြီလို့ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ သတင်းကို ကြားသိခါစအချိန်လည်း ဖြစ်နေပြန်တယ်။
ထိုဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်နားမှာ ရှိတဲ့ Nebula တစ်ခုကနေ ရောက်လာတဲ့ Kalara အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ တောင်းဆိုချက်အရ ရပ်တန့်နေတဲ့သူမတို့ယာဉ်ကြီးက အဖွဲ့ဝင်တွေကို သွားကယ်ပေးဖို့ပဲ။ ဒီလိုနဲ့Captain Kirk ဦးဆောင်တဲ့ သူတို့အဖွဲ့ကြီး ထိုသူတွေကို ကယ်တင်ဖို့ထွက်ခွာလာတော့တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ထိုနေရာအရောက်မှာပဲ အလွန်တရာများပြားလှတဲ့ ယာဉ်ငယ်တွေရဲ့ခြောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကို ရုတ်တရက် ခံလိုက်ရကာ သူတို့ရဲ့USS Enterprise ယာဉ်ကြီးတစ်ခုလုံး ပျက်ဆီးတဲ့ အနေအထားထိ ရောက်ရှိခဲ့ကာ Sulu နဲ့Uhura တို့ အပါအဝင် USS Enterprise အဖွဲ့ဝင်အများစု အဖမ်းခံရတော့တယ်။ Captain Kirk နဲ့Chekov တို့ကတစ်နေရာ၊ Scotty က တစ်နေရာ၊ Bones နဲ့Spock တို့ကတစ်နေရာစီ ကွဲသွားကြကာ ထိုအနီးက ဂြိုလ်တစ်ခုအပေါ်မှာ သောင်တင်ကြရတော့တယ်။
သူတို့ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ သူနာမည်က Krall တဲ့။ Krall ဟာ ဘာကြောင့် သူတို့ကို တိုက်ခိုက်တာလဲ။ Krall ရဲ့အကြံအစည်ဟာ ဘာလဲ။ Star Trek Beyond ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ ခုမှ စတင်လာပါတော့တယ်။
လူတိုင်းသိကြတဲ့အတိုင်း Justin Lin က Director လုပ်ပြီး Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana, Simon Pegg, John Cho, Anton Yelchin တို့ပြန်လည်ပါဝင်ကြပြီး သရုပ်ဆောင်အသစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ Kingsmen ဇာတ်ကားနဲ့နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ Sophia Boutella နဲ့Krall အဖြစ် Idris Elba တို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဓိက ပြဿနာဟာ ကျွန်တော့်စိတ်ထင် ဇာတ်ညွှန်းပဲလို့ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်ကားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးသားတွေ သိပြီးသားတွေကို ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြင်တွေ့ရတယ်လို့ပဲ မြင်ခဲ့ရတယ်။ ဇာတ်လမ်း စတင်ပုံ၊ ဇာတ်အသွားအလာ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပုံနဲ့ဇာတ်သိမ်းပုံတို့ဟာ Star Trek into Darkness နဲ့အလွန်ဆင်တူလွန်းတယ်လို့ထင်ရမိတယ်။ ထို့အပြင် ဒီဇာတ်ကားကို သေသေချာချာကြည့်မိရင် တွေ့ရမဲ့ အရာတစ်ခုက ဇာတ်ညွှန်းဟာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို အသေးစိပ်ရေးဖွဲ့ထားတယ်လို့ပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေဟာ အလွန်ပေါ်လွင်ပြီး ဇာတ်ကောင်တွေဟာ မှေးမှိန်နေခဲ့တာပဲ။ အရင်ဇာတ်ကားတွေမှာ Captain Kirk သည် အလွန်ခေါင်းမာသောသူ၊ သတ္တိရှိသောသူ၊ Odd တွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဟု သရုပ်ဖော်ခဲ့ပေမဲ့ ယခုဇာတ်ကားတွင် ထိုစရိုက်ကို အရင်ကားတွေလောက် မပေါ်လွင်ခဲ့ဘူးလို့ထင်ရတယ်။ သို့သော် သူ့ရဲ့ရဲဝင့်တဲ့ စွန့်စားခန်းတွေတော့ ပါဝင်နေသေးပါတယ်။ အဓိကက Scotty ပဲ။ အရင်ဇာတ်ကားလောက် ရယ်စရာ နည်းတယ်လို့ထင်ရတယ်။ Spock နဲ့Bones ကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် တစ်ကားလုံးမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခန်းတွေကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ သူတို့ရဲ့Conversation တွေကလည်း ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ ဆန့်ကျင်ဘက် စရိုက်ရှိတဲ့ သူနှစ်ယောက်ရဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အခါ ပြောဖြစ်တဲ့ စကားတွေပဲ။ Sulu ရဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာတော့ အကြိုက်ဆုံးအခန်းတစ်ခုကတော့ Trailer တွေထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း Captain Kirk က မင်း ဒီယာဉ်ကို တစ်ကယ်မောင်းနိုင်ပါတယ်နော် လို့မေးတော့ Captain, မင်းက ငါ့ကို နောက်နေတာလားဆိုပြီး သူမောင်းနှင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းပြသွားတဲ့အခန်းပဲ။ (ဘယ်ဇာတ်ဝင်ခန်းလဲဆိုတာ Spoiler ရှောင်ချင်လို့ကြည့်တဲ့အခါ သိပါလိမ့်မယ်။) ဝမ်းနည်းဖို့အကောင်းဆုံးတစ်ခုကတော့ Anton Yelchin ရဲ့Chekov ကို ကျွန်တော်တို့တွေ နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တွေ့ခဲ့ရတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်သက်လုံး Chekov ရဲ့ခပ်ဝဲဝဲ စကားပြောသံရယ်၊ ခပ်ပြူးပြူးနဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ မျက်လုံးတွေရယ်ကို ဘယ်တေ့ာမှ မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးပဲ။ Anton Yelchin သည်ပြီးခဲ့သည့်လက Car Accident နဲ့ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကို နောက် Star Trek ဇာတ်ကားတွေမှာ တစ်ခြားမင်းသားနဲ့အစားထိုး သရုပ်မဆောင်ခိုင်းတော့ဘူး လို့ Paramount က တရားဝင်ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကျွန်တော်တို့တွေ သူ့ကိုအမြဲအမှတ်ရနေပြီး သတိရနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကားလုံးကို ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင် Actions တွေ၊ Actions တွေ အရမ်းများလွန်းတယ်။ တစ်ကားလုံးကို ဇာတ်လမ်းထက် Actions တွေက များလွန်းတော့ တစ်ခါတစ်ခါ အာရုံကိုမနည်းပြန်ဖမ်းရတယ်။ သို့သော် Star Trek ရဲ့ပုံပန်းထဲကတော့ ထွက်မသွားခဲ့ပါဘူး။ Star Trek ရဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဆိုတဲ့အတိုင်း Star Trek ခံစားချက်ကိုတော့ ရနေပါသေးတယ်။ ဒါဟာ Justin Lin ကို ချီးကျူးရမှာ ဖြစ်တယ်။ သူ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Action ခန်းတွေကို ပရိသတ်သဘောကျအောင် ထည့်နိုင်ခဲ့သလို Star Trek theme ထဲကနေလည်း ထွက်မသွားစေရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲ။ Justin Lin ကို သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ပြောချက်အရဆိုရင် ပို၍ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ Director တဲ့။ ဒီလို ပြောကြလို့J.J. Abrams ကို စဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ J.J. Abrams က ရိုက်ကွင်းမှာ လူတိုင်းကို အားတက်အောင် အမြဲပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး Justin Lin ကတော့ စကားနည်းကာ ပိုမိုအသေးစိပ်ဆန်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
Fear of death ဆိုတာကို စာဖတ်သူအနေနဲ့မည်ကဲ့သို့မြင်ပါသလဲ။ သက်ရှိလူသားတိုင်းလိုလိုဟာ မိမိရဲ့သေခြင်းတရားကို ကြောက်လန့်မိကြမှာအမှန်ပါပဲ။ ကြောက်လန့်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း တစ်နေ့နေ့ကျရင် မိမိဆီကို မရောက်လာမှာမှ မဟုတ်တာ။ တစ်နေ့နေ့ကျရင်တော့ ကျိန်းသေရောက်ရှိလာမှာပဲလေ။ ဒီနေရာမှာ Spock က “Fear of death is illogical.” ဆိုပြီး သေခြင်းတရားကို ငြီးတွားရေရွတ်လိုက်တယ်။ သူပြောတာတော့ဟုတ်တာပဲလေ။ လူတိုင်းဟာ တစ်နေ့နေ့ကျရင် သေကြရမှာပဲ။ မဖြစ်မနေ ရင်ဆိုင်ရမဲ့ အရာကို ဘာကြောင့် ကိုယ်က ကြောက်စိတ်ဝင်နေရတာလဲ။ ကြောက်စိတ်ဝင်နေတော့လည်း ထိုသေချင်းတရားက မိမိဆီ ရောက်မလာမှမ မဟုတ်တာ။ သိသိကြီးနဲ့ဘာကြောင့် ကြောက်နေကြတာလဲပေါ့။ ဒီတော့ Bones က ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ “Fear of death is what keeps us alive.” တဲ့။ ဒါဆို သူပြောတာရော မှားလားဆိုတော့ မမှားဘူး။ သင်ယနေ့အထိ အသက်ရှင်နေတာ မသေချင်တဲ့စိတ်ကို ရှင်သန်အောင် ကြောက်စိတ်က နှိုးဆော်ပေးနေခြင်းကြောင့်ပဲ။ ဒါကြောင့်ပြောတာ။ Spock နဲ့Bones ဟာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Star Trek ဇာတ်ကောင်တွေပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စကားတွေဟာ နှစ်ယောက်စလုံးမှန်တဲ့အတွက် အလွန်ကို နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ ဒါဆို စာဖတ်သူရော။ မည်သူ့စကားက မှန်တယ်လို့ထင်သလဲ။ မိမိဘာသာ စဉ်းစားကြည့်ပြီး အဖြေရှာကြပေါ့။
Star Trek နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချက်အရ Star Trek ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ စထွက်တဲ့အချိန်တုန်းက ပြောချင်တဲ့ Messages တွေက လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိုမ ခွဲခြားခြင်းတွေကို တွန်းလှန်ပစ်ဖို့ပဲ။ ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားခြင်းကို တင်ပြထားပြီး ဇာတ်လမ်းရဲ့ဖွဲ့စည်းထားပုံဟာ Democary ထက် Socialism ကို ပိုမိုရောက်တယ်လို့မြင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေချာစွာ တွေးကြည့်လာရင်တော့ Individulisim လို့ပြောရင် ပိုမိုမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်ကလူသားတွေဟာ မိမိတစ်ကမ္ဘာထဲမှာ ရှိတဲ့တစ်ခြားလူမျိုးခြားတွေနဲ့တောင် စစ်ဖြစ်နေပြီး ခွဲခြားနေရင် တစ်ခြားဂြိုလ်က သက်ရှိလူသားတွေနဲ့ (တစ်ခြားကမ္ဘာများတွင် အသိဉာဏ်ရှိ သက်ရှိများရှိလျှင်) မည်ကဲ့သို့ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး ဖော်ဆောင်နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေကို Star Trek ဟာ ဖြေကြားလာခဲ့တာ ယခုဆိုရင် နှစ် 50 တောင် ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ဘာကြောင့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မုန်းတီးစိတ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာလဲ။ ဘာကြောင့် ဖိုမ ဆိုပြီး နေရာတိုင်းမှာ ခွဲခြားနေကြရတာလဲ။ ဘာကြောင့် ကိုယ်အရေပြားပေါ်က အသားအရောင်ကို ကြည့်ပြီး ခွဲခြားပြောဆို ဆက်ဆံနေကြတာလဲ။ အကယ်၍ အကယ်၍ ပေါ့။ တစ်ခြားကမ္ဘာက လူသားတွေကို စတင်တွေ့ရှိလာတဲ့တစ်နေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာက လူသားတွေ ထိုစရိုက်တွေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲကြတော့မှာလဲ။ ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ …..
In Loving Memory of Leonard Nimyo